musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eswatini Breaking News » Sei Eswatini ichingova Nzvimbo Yakachengeteka Yekushanya?
Awards • Kuputsa Kufamba Nhau • Eswatini Breaking News • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Nhasi Eswatini Tourism Authority yakapihwa ne Yakachengeteka Tourism Seal by World Tourism Network (WTN)
Chisimbiso chakavakirwa paWTTC Safe Travel Stamp yakapihwa Eswatini uye kuzviongorora wega.
Anodada ETA CEO, Linda Nxumalo akaudza eTurboNews:
Eswatini Tourism Authority (ETA) yakashanda neWHO neUN pamwe nebazi rayo rezvehutano pamwe neindasitiri yevashanyi kuti vagadzire seti yakasimba yemitemo uye nhungamiro yehutano nekuchengetedza izvo zviri kuteverwa neindasitiri yekushanya munyika. Yakatsigirwa neWHO neUN, zvibvumirano izvi zvakagadzirirwa kuona kuti vese vashanyi munyika vanokwanisa kufamba zvakachengeteka sezvinobvira uye nenjodzi shoma kubva kuCOVID-19. Sekugamuchirwa kwemitemo iyi, Eswatini yakava nyika yekutanga kuzasi kweAfrica kugamuchira WTTC Safe Travels Stamp yekubvumidzwa uye ETA yave kuburitsa iyo Stamp mhiri kwemaindasitiri mukati meEswatini. ETA yakaratidza kukosha kwazvo kunotora kuchengetedzeka kwevashanyi vayo uye yanga ichitora matanho ese aripo kuona kuti Eswatini inogona kushanyirwa uye kunakirwa zvakachengeteka sezvinobvira.
Seal Yakachengeteka Yekushanya ”(STS) inopa imwe vimbiso kana uchifamba panguva dzino dzisina chokwadi.
Iyo STS chisimbiso inovaka kuvimba kwevafambi kwenzvimbo dzakasarudzika uye inova chiratidzo chinozikanwa pasirese panguva dzino dzinonetsa. Kuchengetedzwa kwekufamba kunoenderana neese anopa uye anogamuchira Achiziva chokwadi ichi.
Vabati veSeal vanomiririra akanakisa mukufamba uye vanoratidza kune nyika, kuti kufamba kwakachengeteka ibasa remunhu wese.
Kunyangwe iri nyika diki diki yakakomberedzwa nenyika muSouthern hemisphere, uye yechipiri nyika diki pane kondinendi Africa, Eswatini, yaimbozivikanwa seSwaziland, zvinopfuura zvinogadzira kushomeka kwayo kwehukuru iine akasiyana siyana akasiyana ezvinonakidza uye zviitiko.
Semumwe wevashoma vasara mamamongi muAfrica, tsika nemagariro zvakadzika zvakadzama muzvinhu zvese zvehupenyu hweSwazi, zvichisimbisa chiitiko chisingakanganwike kune vese vanoshanya. Zvakare nevapfumi tsika nemagariro, hushamwari hunoshamisa hwevanhu hunoita kuti vashanyi vese vanzwe kugamuchirwa uye kuchengetedzeka. Wedzera kune izvo zvinoshamisa chinzvimbo yemakomo nemipata, masango nemapani; pamwe Wildlife matura epasirese nyika ari kumusha kune Vakuru Vashanu; uye musanganiswa unonakidza wemitambo yazvino neyetsika, mhemberero uye zviitiko, uye iwe une zvese zvakanakisa nezve Africa mune imwe nyika diki asi yakanyatsoumbwa uye inogamuchira nyika.
Iyo Yakachengeteka Tourism Gungwa chiitiko neWorld Tourism Network: www.wtn.travel
Rumwe ruzivo nezve iyo Yakachengeteka Tourism Seal chirongwa: www.musaiforil.com
Zvimwe pane Eswatini Tourism Authority: www.washingtonpa.com